Ejiji maka ụmụ nwanyị mgbe 40 gasịrị
Ikike nke itolite etolite bu kwa talent. Afọ ọ bụla dị mma, na nke ọ bụla, ị nwere ike ịhụ uru gị. N'isiokwu a, anyị ga-atụle n'ụzọ zuru ezu ihe eji etinye akwa uwe akwa, nke na-adabaghị n'echiche nke ejiji maka ụmụ nwanyị mgbe 40 gasịrị.
Ọ bụrụ na ịnweghị oge ịmegharị anya gị ka ị na-agafe akara afọ iri anọ, mana ị ga-enwe ihe ọghọm, enweghịkwa ụdị nke gị, enwela obi nkoropụ, n'ihi na e nwere ụfọdụ iwu, ị na-ahụ ihe ị ga - eme ka ọ pụta ìhè na uru niile nke afọ gị. N'ezie, ọtụtụ ndị ga-ekwu na ejiji oge a maka ndị na-eto eto na ụmụ agbọghọ, na ịchekwa ebe niile ụdị uwe na nhọrọ dị iche iche na-anọghị na ya, mana anyị ga-enyere gị aka ịme akwa uwe .
Uwe ndị inyom mgbe afọ 40 gasịrị
Ọ dị mma ịmalite n'eziokwu ahụ na afọ a na-eme ka ị gbanwee ụdị ejiji oge ochie karịa ihe ndị dị mkpa na afọ abụọ gara aga. N'okpuru uwe nke nwanyị dị afọ 40, uwe dị otú ahụ dịka otu ụzọ eji eme ihe na-eme ka ọ bụrụ ọrụ, uwe ejiji na uwe elu, ọtụtụ nkedo na pensụl na uwe mwụda uwe, uwe na ejiji na-edozi onwe ha, cardigans na Jetetị ga-adịrịrị. Dị ka o kwesịrị, a ghaghị ijikọta ihe ndị a niile n'etiti onwe ha, nke mere na oyiyi ọ bụla nke gị yiri nke ọma ma zuo oke.
Esi eji ejiji otu nwanyị dị afọ 40, nke mere ka ọ ghara ile anya na nwata ma n'otu oge ahụ chekwaa ịlụ nwanyị? Ogologo oge na-agabigaghị njikwa anyị ma mgbanwe mgbanwe nke mgbanwe nke ọgụgụ ahụ na-adịwanye anya, ya mere tụlee ihe ndị a mgbe ị na-ahọrọ uwe. Na-ajụkwa ihe ndị na-emeghị ka ọ dị mma ma na-agbanye aka n'olu dị mma maka ọdịdị V. Ogologo aka uwe a dịkwa oke mkpa, n'ihi na aka aka dị mkpụmkpụ ga-enye afọ gị n'oge mbụ ị hụrụ ya. Onu ogugu ato, ogwe aka na ihe ndi mmadu na-agbanye n'ime aka ha, ogwe aka a na-agbanye aka na nkpa aka nkpa aka - a na-eji ihe ndi a nile eme ihe n'udo. Ọ bụrụ na ị debere ọnụ ọgụgụ ahụ n'ụzọ dị mma ma ghara igosi na ị ga-eji ọgwụ dị iche iche, mee ka onwe gị nwee ụdị T-shirts, ma ọ bụ ezigbo mma site na owu. Ị nwere ike ikpokọta uwe ndị dị otú ahụ na uwe ogologo ogologo ma ọ bụ iyi na uwe ogologo ọkpa, cardigan ma ọ bụ jaket. Kaadị cardigans dị mma bụ ihe dị mkpa na uwe ụmụ nwanyị maka 40. Site na nke a, ị nwere ike ịmepụta ọtụtụ ihe oyiyi nkecha, jikọta ya na akwa, akwa akwa, jeans na pusa. Ọ bụrụ na ị ka nwere nsogbu, zoo ya n'okpuru cardigan na akwa eriri e kegidere ya. Ọ bụrụ na ị bụ onye nwere ụta apị ụkwụ, tinye ya na cardigan n'elu uwe gị ma ghara itinye ya na ya, ka ị ghara ịmepụta ụda dị elu n'úkwù.
Kedu ihe ga-eyi ụmụ nwanyị karịa 40?
Uwe akwa pensụl bụ àgwà dị mkpa nke uwe wodrobu gị. Ogologo dị n'elu ma ọ bụ dị n'okpuru ikpere na akpụkpọ ụkwụ na ikiri ụkwụ ga-enye gị onyinyo nke ịdị mma. Ọzọ, ọ bụrụ na e nwere nsogbu n'ime afo, kpuchie ya n'úkwù, ma bulie ya elu.
Pants gbalịrị ịhọrọ ịkpụcha kpochapu, ị nwere ike iji ụyọkọ, ịzụta azịza zuru ezu ma gbanwee, nke a ga-agbakwunye na afọ ndị ọzọ gị. Uwe ọkpa a zuru ụwa ọnụ, ha nwere ike na-eyi ha n'ọfịs, nakwa na nnọkọ ahụ, ma ọ bụrụ na ị na-eji uwe ejiji.
Uwe ejiji nke otu nwanyị dị afọ iri anọ na-eyikwasị uwe elu karịa. Ọ bụ ejiji nke na-eme iji mesie ike niile nke ọnụ ọgụgụ ahụ ma zoo ezighi ezi. Ntucha nke ọma, akwa akwa ma ọ bụ uwe akwa na-acha ifuru, ebe niile nwere ebe, ma echefula banyere ogologo oge.
Olee otú ejiji maka ụmụ nwanyị ruo afọ iri anọ anyị gachara, ọ dị mkpa ka ị ghọta nke ọma na ọ bụ nwata ma nọgide na-abụ nwanyị.
Kedu ka esi eburu okpu na jaket ala?
Photoshoot na oké osimiri
Ihe ị na-eyi jaket ala - nke kachasị ejiji oge a
Kedu ihe ị ga-eyi uwe mwụda kyuloty?
Akwụkwọ edemede maka agbamakwụkwọ
Kedu otu esi eje ije n'elu ikiri ụkwụ?
Achịkpọ Pirate - ejiji maka ụmụ agbọghọ
Kedu ihe ị ga-eji akwa jaket?
Mara mma roba akpụkpọ ụkwụ
Uwe uwe - ejiji ejiji, ihe eji egwu egwu na egwuregwu
Oge ọmụmụ afọ ọhụrụ n'ụlọ
Foto ndị dị na ọka wheat
Kedu ihe ị ga-eme n'oge okpomọkụ?
Cultivator maka oge ezumike
Akwukwo akwukwo na salmon
Kedu ihe ọla ndị ahụ yiri?
Greenland - nnukwu agwaetiti na mbara ala
Kedu otu esi eji akwa ụra?
Ntọala kacha mma maka akpụkpọ anụ dị iche iche
Ọkpụkpọ maka nkịta
Ụmụaka hà nwere ike ịṅụ kọfị?
Nwa okorobịa na-eji ejiji eme ihe
Ann Hathaway na show Good Morning America kwuru banyere ime na nne
Vitamin maka ụkọ ọnwụ - ihe dị irè vitamin na mgbagwoju anya maka ọnwụ
Nkwadebe ọhụrụ maka migraine
Osisi maka ọgwụgwọ nke imeju na mgbake ya
Ule maka ikpu ìsì
Sterilizer maka toothbrushes